LITETITE jiro jiro | Solar Solve Marine
Blackout Jamba ho an'ny sambo sy ny sambon'ny sambo
LITETITE® dia ny jiro feno lamba maintimainty (99%) - tsara indrindra ho an'ny tontolo izay misy fepetra mitranga indraindray, ohatra; tabilao, trano fanaraha-maso, sinema, efitrano fianarana, laboratoara, atrikasa ary toerana fisakafoanana an-dranomasina sy sambo.
LITETITE® dia napetraka ao anaty kasety aluminium fiarovan-doha vita amin'ny alàlan'ny fantsona anatiny sy ivelany amin'ny alimina izay misakana ny fahazavana tsy hiditra.
Hita amin'ny loko lehibe amin'ny loko lamba LITETITE® dia mitodika tsy an-kiato amin'ny alina, manome toky ny fiainana manokana sy manome fahatsiarovana hafakely. Ny fifantenana lehibe amin'ny loko lamba dia midika fa afaka mifanaraka tanteraka amin'ny efitranonao hafa izy.
Ny fantsom-barotra Aluminium, ny kasety sy ny lalamby ambany dia azo ekena amin'ny loko nofidina.
Tahaka ny vokatra Solar Solve, LITETITE® dia natao ho an'ny mpanjifantsika ao an-tsaina mba hahazoana antoka fa mora ny mametraka sy tsotra ny miasa.
Miaraka amin'ny kilasy voalohany vokatra vita avy amin'ny maodim-barotra, haingam-pandeha haingana, fanamafisana ny kalitao, fizarana sara-bidy, tsara tarehy aorian'ny fanompoana ary 1-Guarantee taona Hanontany tena ianao hoe ahoana no fomba nitantanana anao tsy misy LITETITE®.
LITETITE® Ny jiro mainty dia ao anaty rafitra roa, ny iray ho an'ny ao anatin'ny toeram-pialan-tsasatra ary ny iray ho an'ny ivelan'ny toeram-pitsaharana. Rehefa manafatra azafady lazao raha mila ny rafitra Inside na Outside Recess ianao.
Ity sary ity dia mampiseho ny kasety napetaka amin'ny Side Fix Fix miaraka amin'ny Channels Side ao anatin'ilay Vorona maintin'ny mainty
Ity sary ity dia mampiseho ny faran'ny fantsom-pitaovana eo am-baravarankely. Ny fantsom-pifandraisana mainty dia ho an'ny fikirakirana lohataona Constant Tension Center. Side Chain na jiro mandeha amin'ny herinaratra dia mitovy amin'ny naseho etsy ambony.
Ity sary ity dia mampiseho ny fantsom-pitaovana ivelany amin'ny sisin-dàlan'ny Curtain Feed. Azafady azafady fa ny fantsom-pandrefesana dia malalaka kokoa noho ny an'ny Inside Recess mamela ny fametahana eo ivelan'ny varavarankely.
Ity sary ity dia mampiseho ny mekanisma fanidiana hidirana amin'ny lohataona Operated Spring. Ity sary ity koa dia mampiseho ireo fantsom-pitaovana eo anilan'ny Sill. Ny sill dia takiana mba hanampy amin'ny fanakanana ny jiro rehetra ary ao anatin'ny Rafitra Fitsaharana ivelany.
Ity sary ity dia mampiseho ny fomba fijerin'ny Side Channel sy Sill. Ny entana mitsivalana miolakolaka dia fonony hanafenana ny visy ilaina amin'ny fametahana ny jamba amin'ny rindrina.
Ny karazan'asa azo ampiasaina ho an'ny LITETITE® Ireo jirikelina no aseho etsy ambany. Azafady mifandraisa amin'ny Sampan-draharaha teknika momba ny fampahalalana fanampiny
Famotsorana fifamoivoizan'ny lohataona ivon'ny fifamoivoizana - ao anatiny na ivelany.
Rantsana ankavia havia havia na havanana.
Ny jiro / ekranny lohataona no ampiasaina amin'ny tadiny
AC or DC Electrical Operation
Electric amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso an-tserasera, ny fanaraha-maso ny tarika ary / na ny an'ny olona tsirairay - izay mety amin'ny jambes izay sarotra miditra. Low-malefaka
(LOVO-24V DC) dia misy amin'ireo jiro madinika kely. Ny habaka avo lenta (HIVO-230V AC, 50Hz na 60Hz) dia azo alaina amin'ny haben'ny jirom-borona. Mifandraisa amin'ny sampana teknika ho an'ny antsipirihany bebe kokoa.
Ny mpandrindra ny radio dia CE (Eoropeanina mifanaraka) ary mandalo amin'ny 433MHz.
Mitandrina ny mpanara-maso ny radio:
2006 / 95 / EC Directive Voltage Low Voltage
89 / 336 / EEC Direction EMC
1995/5 / EC Radio sy ny fifandraisan-davitra Telecommunications Terminal (R & TTE)
FANAMARIHANA: Azafady mba ho azo antoka fa tsy hanelingelina ny fitaovana hafa rehetra izany alohan'ny fikarakarana.
Ny bateria mahazatra na ny bateria azo averina indray dia azo ampiasaina
fanaovana - 67% PVC, 25% Fiber Glass, 8% Adhesive
Fire Classification: - France - M1
Maintenance: - mora voadio amin'ny savony sy ny rano
Color range: - Navy Blue, Cream, Ecru, White, Gray sy Black. Loko hafa azo atao amin'ny fangatahana.
Ahoana no iheverana azy?
Misy toro-lalana feno Eto. Na avy amin'ny anay mpiasa ara-tekinika.
Tsindrio eto raha hijery ny torolàlana fametrahana
Ny haavon'ny lanitra sy ny haavony
Maximum ary farafahakeliny Ny halehibe dia hiova, arakaraka ny karazana fandidiana. Ireto manaraka ireto: -
Ny haben'ny rehetra dia milimetatra (mm).
* Voamarikao fa ny sakan'ny marika dia tsy midika fa afaka mahatratra ny latsaka kely sy ny mifamadika. Miangavy anao izahay mba hijery raha afaka manamboatra ny habeny ianareo raha lehibe.
Manolotra servisy 24 ora Fast Offpatch isika ho an'ny baiko maika. Ny jiro LITETITE® dia omena alamina amin'ny fametrahana ny fametahana ho an'ny foibe tsirairay ho an'ny kofehy tsirairay ary tonga ho vondrona iray manontolo. Manana tetikady miavaka izy ireo amin'ny fanorenana haingana sy mora amin'ny ekipan'ny sambo.